डेङ्गु के हो ? कसरी सर्छ ? यस्ता छन लक्षण र बच्ने उपायहरू |
८ भाद्र २०७६, आईतवार ०४:३३ मा प्रकाशित
डेङ्गु भनेको लामखुट्टेको टोकाईबाट मानिसमा सर्ने एक प्रकारको भाईरल ज्वरो हो । खासगरी फिमेल एनोफेलिज लामखुट्टेको टोकाईबाट संक्रमित भएर डेङ्गु रोग लाग्ने गर्छ । विशेष गरी समुन्द्री सतह भएका देशहरु तिर यो रोगको प्रकोप धेरै देखिने गर्छ ।
कसरी सर्छ डेङ्गु
जब डेङ्गु संक्रमित लामखुट्टेले एउटा स्वस्थ्य व्यक्तीलाई टोक्छ त्यही टोकेको ठाउँबाट मानिसको शरीरभित्र प्रवेश गर्दछ । त्यसपछि रगतमा पाईने सेतो रक्तकोष (WBC) भित्र प्रवेश गर्छ र मानिसमा विभिन्न खालका लक्षणहरु देखा पर्छन्। डेङ्गुका लक्षणहरु डेङ्गु संक्रमित व्यक्तिहरुलाई विभिन्न लक्षणहरु देखापर्छन्
आँखा रसाउने जस्ता लक्षणहरु शुरुमा देखा पर्छन्
डेङ्गुको संक्रमण फैलिदै गएपछि थप लक्षणहरु देखा पर्छन् । जस्तै :
मुख गिजाबाट रगत आउने
रक्क्तचाप कम हुने
हृदयगती कम हुने जस्ता लक्षणहरु देखा पर्छन्।
खासगरी मधुमेह, दम भएका व्यक्तिहरु र बच्चाहरुमा डेङ्गुको जोखिम धेरै हुन्छ । डेङ्गुका बिरामीहरुको रगतमा प्लेटिलेट नामक कोषको कमि हुने गर्छ । डेङ्गु भाईरल रोग भएको कारणले गर्दा यसको खासै उपचार छैन ।
सामान्य किसिमको डेङ्गु १ हप्ताभित्रमा निको हुने गर्छ भने कतिपय ठाउँमा बिरामीको स्वास्थ्य अवस्था हेरी चिकित्सकको सल्लाह अनुसार उपचार गरिन्छ । एक व्यक्तीबाट अर्को व्यक्तीमा लामखुट्टेको टोकाइबाट लाग्ने भएकोले गर्दा नै लामखुट्टेको नियन्त्रण गर्न विषादी प्रयोग गरिन्छ ।
यसको नियन्त्रणको लागि पनि विराटनगर महानगरपालिकाले जनशक्ति परिचालन गरी विराटनगर स्थित वडाहरुमा मालाथिएन फग्गी स्प्रे गरिएको छ । शिक्षक र विद्यर्थीहरु परिचालन गरी जनमानसमा जनचेतना फैलाउने काम पनि तिव्र रुपमा अघि बढेको छ । विभिन्न सामाजिक संस्थाहरुले पनि डेङ्गु नियन्त्रणका लागि पिछडिएका समुदायमा गई जनचेतना फैलाउने काम अघि बढाई रहेका छनर सबैमा आ–आफनो क्षेत्रबाट सुरक्षिट रहन पनि आवश्यक देखिन्छ।
डेंगु ज्वरोबाट बच्ने उपायहरू
बसोबास गर्ने ठाउँ वरपर फालिएका पानी जम्न सक्ने सामान जस्तै पुराना टायर, टुटेफुटेका बोतलहरू र कपहरूमा पानी जम्न नदिने ।
पानी जम्ने खाल्डाखुल्डीहरू पुर्ने वा मट्टीतेल छर्कने ।
खानेपानीको ट्यङ्कीलाई हरेक हप्ता खाली गरेर सफा गर्ने र लामखुट्टे प्रवेश गर्न नदिने ।
गमलामा भएको पानी सुक्न दिने वा हप्तामा दुई पटक फेर्ने वा मट्टीतेल छर्किने ।
कुलरमा जम्मा भएको पानी प्रत्येक २/४ दिनमा फेर्ने र हरेक २ दिनमा मट्टीतेल छर्किने ।
लाम्खुट्टेको टोकाईबाट बच्न पुरा शरीर ढाक्ने कपडा लगाउने र लाम्खुट्टेको टोकाईबाट बच्ने मलाम लगाउने ।
सुत्दा झुल प्रयोग गर्ने ।
घर वरीपरीको वातावरण सफा राख्ने ।